Shanyira Switzerland nyowani: Mahotera Anoshandiswa neRobots haadi Migwagwa & Motokari, asi Lamas, Mbudzi, uye Breathtaking Sceneries
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Musangano Weindasitiri Nhau » Shanyira Switzerland nyowani: Mahotera Anoshandiswa neRobots haadi Migwagwa & Motokari, asi Lamas, Mbudzi, uye Breathtaking Sceneries
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • vanhu • Switzerland Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
mufananidzo wechikwereti: Elisabeth Lang
Kwaive kuda kuziva, mikana yekubatanidza, hurukuro dzekutengesa dzakaunza varidzi vemahotera uye vanopfuura zana vekuratidzira, izvo zvinopa indasitiri yeHotera pamwechete mushure memazuva angangoita mazana matanhatu ekunyarara kwakanyarara nekuda kwekurambidzwa kweCorona.
Halle 550 iri kure neyakajairika glitzy uye inopenya 5-nyeredzi Mahotera Mahara muZurich, uko mhando yemusangano uyu inowanzoitirwa.
Switzerland yekutanga Hotellerie Suisse Hospitality Summit yakarongedzwa neHotrerevue, bhuku remuno rekutengeserana, rakwezva vanopfuura vatori vechikamu 1152 vhiki ino.
Chiitiko ichi chakaratidza kukosha kwekutaurirana pachedu munyika yedu nyowani yekuita zvemagetsi nemahofisi epamba.
Halle 550 inzvimbo muZurich Oerlikon.
Iyo Hospitality Summit yaive yekutanga yerudzi rwayo muSwitzerland kubvira COVID-19 yakava denda munaKurume wa2010.
Kuchengeta vashanyi vakachengeteka, munhu wese aifanira kuratidza gwaro rekubaiwa (green Pass). Kune avo vasina kubayiwa jekiseni, yakaipa COVID-19 bvunzo yaidikanwa.
Zvinotoshamisa kuti pakanga pasina mutemo wemask, mushure mekupfuura nepakati pekutarisa muHalle 550. Izvi zvakasiya vanachiremba vasina chokwadi asi vatori vechikamu vakafara kwazvo.
Maskless panzvimbo yekufema - tune nemaitiro.
"Zvirinani Tose" yaive kiredhiti yeMutungamiri weHotellerie Andreas Züllig mukutaura kwake kwekutanga.
“Tinofanirwa kugadzira nzira nyowani dzePost Pandemic, sekubata kwatakaita danho rekutonga nedambudziko nemazano ekugadzira. Sevane hotera uye vanamuzvinabhizimusi, isu hatisi vatungamiriri chete asiwo avo vanoziva mafambiro uye manzwiro ezviitiko uye vanoita nekufanoona.
Swiss Tourism ichataridzika sei seri kwehosha?
Asi izvo izvo indasitiri yekugamuchira vaeni, ndege, uye indasitiri yekushanya inoda chaizvo chirevo chetariro.
Paive nekutaura kwakawanda pamusoro pezvinhu zvitsva uye kuita kwemajigital, asi vatori vechikamu vaidei chaizvo?
Izvi zvakatopfuura uye zvakambokurukurwa makore apfuura. Chii chatinonyatsoda mune yedu Post Pandemic World?
Zvese zvatinoda mushure mekukiya kuzhinji kugara pamba kugumbatira.
Ipa vashanyi kumbundira!
Vafambi kupfuura nakare kose vanoda kunyemwerera kukuru uye kugamuchirwa kwoushamwari pamabiko zviri nyore sezvazviri.
Nekudaro, chitsva chaicho chaive robhoti minibar (naRobotise, kuGerman) kuunza chinwiwa chinodikanwa chakananga kuimba yevaeni.
Mubvunzo wangu kuti irobhoti raizodhura zvakadii?
Mhinduro yakapusa yaive robhoti yaidhura zvakafanana neweta.
Asi izvi zvinogona kusiyana kubva kunzvimbo dzemubhadharo wakakwira unobhadharwa muSwitzerland kumubhadharo unobhadharwa munyika dzisingadhuri, senge muAsia.
Asi zvakanaka here kuti uve nemarobhoti asina kuburitswa achiuya kuzopa zvinwiwa zvako mukati medenda, uchisiya wakanyarara zvakare sekureba mabhatiri apera?
Kukurukurirana kwepaneru nevatauri makumi masere nevatanhatu vakatora maikorofoni zvaive zvinhu zvakakosha zveHospitality Summit 84
Tourism yakanyanya kurohwa, anodaro Urs Kessler, CEO Jungfrauen Bahnen, muhurukuro yekuti misika yepasi rose ichadzoka riini.
Iko hakuna kufungidzira.
Iyo yeSwitzerland yemusika musika kubva gore rapfuura (2020) yadonha.
VaSwitzerland vari kuenda kunze kwenyika zvakare. Zvisinei Swiss yekushanya iri kuwana yakanakisa manhamba kubva kuGerman, Belgium, uye UAE.
Denda risati rasvika, Switzerland yaive neanopfuura makumi manomwe muzana emakamuri evashanyi anogara nevashanyi vanobva kuAsia.
Kudzoka kwevashanyi veChinese mushure meMitambo yeOlympic kuchave kwakasimba. Switzerland ine mapurojekiti maviri anovimbisa muAsia yegore rinotevera. Swiss yekushanya ine vashandi vekusimudzira vanobva kuChina, India, Maodzanyemba akadziva kumadokero, uye Southeast Asia. Zvinoenderana nevari mukati, pane hombe dhizaini yekushanya kubva mudunhu iro.
Misika dzakaita seIndia, South East Asia, neBrazil dzichadzoka. Chokwadi India ichave inoshandura mutambo kuSwitzerland. Asi kubaya nhomba ndiyo nyaya yakakosha yakabatanidzwa neyakagadziriswa uye yakapusa kugadzira vhiza.
Halle 550 muZurich: Nzvimbo yeHititality Summit
Tiri kurarama muhudzvanyiriri nekusabaya nhomba anodaro Dieter Vranck CEO weSwitzerland International Airlines: 90% yeCabin Crew yedu yakabayiwa nhomba asi isu tinofanirwa kupa kune avo vasina kubayiwa.
Kugara uchichinja mamiriro kana uchifamba idambudziko hombe. Kubaya nhomba ndiyo tikiti yakakosha kuti uwane chinzvimbo chakasimba. Nendege zhinji hadzina chinhu, asi nekukurumidza panosimudzwa kwega kwega - marejisheni ari kukwira kumusoro pasina nguva.
Neraki isu tiri kuwana akawanda uye akawanda mapoka anobva kuUnited States. Vhoriyamu yevaenzi vanobva kuAmerica yakakwira sepamberi pehosha.
Asi isu hatigone kuenda kuAmerica parizvino, uye hatigone kuenderera tisina kuenda kuUSA kwenguva yakareba. Pasina nendege dzeCargo, taizove nendege dzisina chinhu pahafu yenzira dzedu dzeUS.
Ndege dzebhizimusi dzichapora zvishoma nezvishoma asi isu tinotarisira kubvisa makumi matatu kubva muzana kusvika gore ra30.
Gore ra2022 harizodzokere kuchinyakare chero- asi Europe iri kusimukira; 2nd nzvimbo muUSA uye yechitatu nzvimbo Asia inotsanangura Vranckx. Isu tiri mumamiriro ezvinhu atisingakwanise kuisa zvakawanda mukuvandudza.
Ndege dzichagara dzichingogara, anodaro Vranckx, CEO weSwitzerland.
Kugamuchira Vaeni Musangano 2021
Ipo Martin Nydegger, Director weSwitzerland Tourism, ari kukumbira kune vese achiti: "Bayiwai majekiseni, haina kutonhorera asi yakakosha." Hatina nguva yekumirira mune yedu chikamu. Pamusoro pekushanya kwapera.
Nydegger ane chivimbo chekuti misika yepasi rose ichadzoka na2023. Switzerland inyika yepamusoro yevashanyi. Iine mhando, hausi mubvunzo wekushambadzira.
Kune MICE bhizinesi, mwaka we2019 wakapera zvakanyanya.
Hapana chakadai chakasara uye isu tiri kutaura nezvevhoriyamu yemashoma 5% muna 2021.
Zvinotorawo vashoma vashandi izvozvi.
Asi bhizinesi reMice rinogona kurarama here?
Iyo MICE hotera indasitiri muSwitzerland ichamanikidzwa kubhuka kuburikidza nemapuratifomu senge booking.com, hrs, nepo vechidiki vachigona kuenda kuGoogle kunotora mahotera emusangano.
48% yemabhuku akaitwa nhare achishandisa mapuratifomu seyakafanana nhare. Musangano mahotera anogona zvakare kushandirwa kuburikidza neAmazon, kana Misangano Sarudza, iyo inosiya kukanganisa kukuru pane vanoronga misangano.
Iyo Mubairo Hotera yegore yakaunzwa kekutanga kuna Nadja naPatric Vogel weFairytale Hotel Braunwald (4 Nyeredzi).
Paive nekutaura kwakawanda pamusoro pekuvandudza uye digitization, asi hotera iyi haina kana mugwagwa wekusvikako.
Braunwald haina mota.
Iyo Braunwaldbahn inokutora iwe kusvika kwese hafu yeawa kubva kuchiteshi chemupata. Unokwaziswa neLamas, Mbudzi kana uchipfuura "Goridhe Mbudzi zambuko".
Mombe dzinofara, huku dzakabatikana dzinokamba tsuro, uye nzvimbo dzinoyevedza dzakakumirira.
Nei Fairytale Hotel?
Nguva refu yapfuura musikana mudiki aichema zvine ruzha muresitorendi uye akangomira apo muridzi Fridolin Vogel akavimbisa kumuudza ngano.
Kusvika nhasi tsika iyi iri kurarama nekupembererwa mazuva ese naNadja an Patric Vogel. Zvakakodzera! Makorokoto!